U-Sweet S.Michele yikona ekhethekileyo yothando kwindawo ebetha intliziyo yedolophu. Kuye kwaqulunqwa kuzo zonke iinkcukacha ukuvumela ixesha elikhethekileyo lidlule kwabo bahlala apho. Ifakwe kumgangatho wokuqala wesakhiwo senkulungwane yamashumi amabini, iquka indawo yokuhlala, kunye nekhitshi encinci, ixhotywe ngokupheleleyo i-sofa yomyili kunye ne-smart TV, igumbi lokulala eliphindwe kabini kunye ne-jacuzzi kunye ne-TV; igumbi lokuhlambela elineshawa yeengxangxasi, i-WIfi ngaphandle kwemida. Ukuba kunokwenzeka khangela ngokwakho.
I-Sweet San Michele, ikwisakhiwo sokuqala sika-'900, kwenye yeevenkile kunye nezitrato zobomi zasebusuku. Isondelelene kwaye ithambile, isandula ukulungiswa, ifakwe umoya ngokupheleleyo, ixhotyiswe ngayo yonke intuthuzelo, iyilwe kwaye yafundelwa ukugonwa ngubani ohlala kuyo. Le ndlu iquka indawo yokuhlala, enekhitshi evulekileyo, isofa kunye ne-smart TV; igumbi lokulala elineJacuzzi kunye neTV yesibini ngaphakathi kunye negumbi lokuhlambela elineshawa yeengxangxasi. Ikhitshi ixhotyiswe ngayo yonke into, i-induction, ifriji, i-dishwasher, umatshini wekofu weNespresso, iketile kunye ne-oveni. Isofa yomyili etofotofo ingaba 'yibhedi eyongezelelweyo, nokuba sicebisa indlu ngababini okanye iintsapho ezingatshatanga okanye ezincinci (max 3 pax). Ukuba unabantwana abancinci okanye abaneemfuno ezizodwa ndiyakucela imbeko ukuba undazise xa ubhukisha, ukuze sikwazi ukunika izinto eziyimfuneko kusana lwakho. Ukuba unosana oluncinci, unokufumana ibhedi yokuhamba, enokucelwa ngexesha lokubhukisha.
Inqaku elibalulekileyo: indlu ibekwe kumbindi wesixeko, emva koko kwi-ZTL (indawo ethintelweyo yetrafikhi), ukuba ufika ngemoto siya kucwangcisa ngokufanelekileyo (kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kokufika kwakho, kunye nemodeli yemoto kunye nenombolo yepleyiti esibonelela ngayo ukuze sikwazi imvume yokungena kwindawo ethintelweyo yetrafikhi).Umoya womoya kunye ne-WIFI engenamkhawulo. Ngena wedwa: xa uphambi komnyango, kufuneka usitsalele umnxeba kwaye sivule umnyango kwi-remote control, emva koko uya kumgangatho wokuqala kwaye uya kufumana ibhokisi elincinci lokhuseleko kunye nezitshixo zakho. Iiyure ezingama-24 ngaphambi kokufika kwakho i-Airbnb iza kukubonisa zonke iinkqubo. Ungazikhathazi ngayo, ilula kwaye ikhuselekile.
I-Sweet San Michele isembindini wesinye sezitrato eziphambili zobomi basebusuku, isibonelelo esityebileyo seebha, iindawo zokutyela, ii-pubs nokunye okuninzi.
Ciao Siamo Elisa e Santino , genitori di due splendide bambine Anita e Sara, amiamo viaggiare ma non avendo molto tempo per farlo, abbiamo deciso di ospitare viaggiatori da tutto il mondo, che è un po' come viaggiare sognando. Siete tutti benvenuti ,faremo il possibile per farvi sentire a casa. Hello, We are Elisa and Santino, parents of two beautiful little girls Anita and Sara, we love to travel but not having much time to do it, we decided to accommodate travelers from all over the world, which is a bit 'like traveling dreaming. You are all welcome, we will endeavor to make you feel at home.
Ciao Siamo Elisa e Santino , genitori di due splendide bambine Anita e Sara, amiamo viaggiare ma non avendo molto tempo per farlo, abbiamo deciso di ospitare viaggiatori da tutto i…
Siya kufumaneka ngefowuni nangaliphi na ixesha lokuhlala kwakho ukufumana iingcebiso, iingcebiso okanye naluphi na ulwazi.